Minisitry ny fizahan-tany Breziliana: sazy nomen'Andriamanitra ho an'ny karnavaly ny COVID
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Minisitry ny fizahan-tany Breziliana: sazy nomen'Andriamanitra ho an'ny karnavaly ny COVID
Ny COVID-19 dia tsy Virus Sinoa intsony, fa ilay Virus Breziliana Breziliana dia namorona mba hanasazy an'i Brezila noho ny nanaovany ny Fetibe Breziliana.
Nanjary olana teo an-toerana tany Brezila ny valanaretina COVID manerantany rehefa nofaranan'ny minisitry ny fizahantany fa sazy avy any an-danitra ny viriosy hanamelohana ireo seho naseho nandritra ny karnavaly Breziliana malaza eran-tany
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia nanapaka fifanarahana tamin'i Brezila ho valin'ny fifidianana ho an'i Brezila tamin'ny fanaovana ny minisitry ny Breziliana ho mpilalao turista manerantany.
Mpanao gazety kanadiana iray an'ny Globe nisioka hoe: manala baraka ity minisitra ity, toy ny olona rehetra ao amin'ity governemanta ity.
COVID dia sazy avy any an-danitra amin'ny fampisehoana izay antsoin'ny minisitry ny fizahantany breziliana fa fihetsika manafintohina amin'ny karnavaly malaza breziliana.
Mazava ho azy fa ny Hon. Minisitry ny fizahantany Gilson Machado Guimarães Neto, mahazatra as Gilson Machado Neto Tsy afaka nifototra tamin'ny siansa io famaranana io.
Izy dia Breziliana mpandraharaha sy mpanao politika, ary ny ankehitriny Minisitra ny fizahan-tany ho an'i Brezila eo ambany fitondran'ny Jair Bolsonaro. Nosoloiny i Marcelo Álvaro Antônio.
Nandray ny toeran'ny minisitra io tompon'andraikitra io tamin'ny volana desambra 2020, taorian'ny naha-talen'ny Jeneraly ny Agence Breziliana ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany iraisam-pirenena (Embratur), toerana niasany tamin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany Breziliana any ivelany ary, tato ho ato, nandritra ny areti-mandringana. amin'ny fampiroboroboana ny firenena. Talohan'ny naha-filoha an'i Embratur azy, tamin'ny Mey 2019, dia sekretera nasionalin'ny Ecotourism an'ny Ministeran'ny tontolo iainana (MMA) izy.
I Brezila no handray ny birao voalohany an'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) any amin'ny faritr'i Amerika, hoy ny sekretera jeneralin'ny fikambanana, Zurab Pololikashvili. "Afaka nankany Etazonia aho, afaka nankany Karaiba, afaka nankany Argentina aho, saingy tsia, nisafidy an'i Brezila [ny WTO] satria fantany ny mety ho fananantsika," hoy izy. Ny tena antony dia nampanantenain'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO hametraka ny safidiny i Brazil amin'ny fifidianana UNWTO vao vita, izay nolazain'ny maro fa mifototra amin'ny hosoka sy fanodinkodinana.
Mpikambana ao amin'ny sendikan'ny fizahantany Rota dos Milagres sy ny Birao Fifanarahana Maragogi (AL), Machado Neto, nahazo diplaoma tamin'ny fitsaboana ara-biby, fa tamin'ny fizahan-tany kosa no nahitany ny anjara asany, niasa tao amin'io sehatra io nandritra ny 30 taona mahery. Tamin'ny taona 52 dia mpandraharaha, mpamokatra hetsika ary mpitendry mozika koa i Gilson.
Orinasa lehibe ho an'ny fizahantany any Brezila ny Carnival, saingy mazava ho azy fa manana fomba hafa ny minisitra ankehitriny.
Ity misy bitsika nataon'ny minisitra navoaka androany:
Ny minisitry ny fizahantany any Brezila dia manolo-kevitra fa ny areti-mifindra coronavirus dia sazy avy tamin'Andriamanitra taorian'ny fampisehoana diarin'ny karnavaly nanehoana an'i Jesosy heveriny ho manafintohina.
Raha jerena ny habetsaky ny indostrian'ny fizahan-tany Breziliana matetika vita tamin'ny Carnival - izay hitranga ankehitriny - ary very ankehitriny, dia mety tsy ity ny hetsika farany hendry indrindra avy amin'ny minisitry ny fizahantany.
Bitsika iray nataon'ny mpanao gazety kanadiana iray: nilaza androany fa nisy tantara nahatsiravina nampihariko momba ny fahasimban'ny toekarena tao Recife / Olinda nefa tsy nisy ilay fankalazana. Ny herinandrony koa dia hamoaka sombin-javatra ao amin'ny The Globe and Mail momba ny zava-misy any Rio aho. Manala baraka ity minisitra ity, toy ny olona rehetra ao amin'ity governemanta ity.
Peace Through Tourism dia nisy ny Fihaonamben'ny Fianakaviana niaraka taminao
Mivoaha amin'ny ahiahy any amin'ny toby nokleary aorinan'ny horohoron-tany Japoney